In ka badan 50 jeer oo aan Taleefan qarsoodi ah kula hadlay (muddadii xabsiga), Maxay ahayd farriintii ugu qaalisanayd een ka helay by Ismaciil Cali | ogaden24
In ka badan 50 jeer oo aan Taleefan qarsoodi ah kula hadlay (muddadii xabsiga), Maxay ahayd farriintii ugu qaalisanayd een ka helay by Ismaciil Cali
Jul 22, 2018 - Aragtiyood
In ka badan 50 jeer oo aan Taleefan qarsoodi ah kula hadlay (muddadii xabsiga), Maxay ahayd farriintii ugu qaalisanayd een ka helay?
Kadib markay Saraakiisha Tigreegu usoo bandhigeen laba doorasho midkood:
1) Inuu Jig-jiga tago, lana shaqeeyo maamulka dad-cunka ah ee Cabdi iley, taas baddalkeedana lasiiyo nolol-wanaagsan iyo amni (Guryo, Baabuur iyo Lacag) iyo
2) Inuu diido una diyaar-garoobo cawaaqibka ka dhasha madax adaygiisa.
Markii uu xogtaas ii sheegay isagoo afka dhulka ku haya, waxaan siiyey talo nuxurkeedu ahaa: Sharaftaada adigaa ka go’aan gaadhikara laakiin mustaqbalkaaga kama go’aan gaadhikartid (Diid wixii aan kuu qalmin, Masiirkaagana ilaahay uddaa).
Wuxuu igu yidhi: Aniga laba arrimood midna i qaadimayso —Insha allaah:
A ) Fulaynimo iyo naf jacayl i qaadimaayaan oo mararka qaarkood waxaaban qawadaa (Saluugaa) nolosha sababtoo ah waxaan Meydkooda midba geed hoostii maalin kaga dhaqaaqay boqolaal ama kumanaan wiil oo nin qartii (Xulkii/labeentii) ummadda ah;
B ) Cunguri-waynina i qaadimayso, oo cuntada iyo cabitaanka waxaan ugu jeclahay Caanaha Geela, iyagana maalintii Galaas (koob) baan ka cabbaa, haddaan waayana Saxan-yar oo Bariis ah ayaan cunaa oo igu filan. Sidaa awgeed anigoo intaasi igu filan tahay majirto sabab aan karaamadayda ugu iibsado hungiri iyo dhal-dhalaal adduunyo!.
Ilaahay mahaddii, maantuu u’aayey adkaysigii ay Tigreegu Madax-adayga ku sheegeen.
Fiiro-gaar ah: Maadaama oo uu N/hure Cabdikariim xorriyaddiisii dib u helay, ehelkiisii iyo saaxiibadii halgankana dib ula midoobey insha Allaah, xusuustaa kooban ayaan kusoo afmeerayaa qoraallo tiro badan oo aan Qaddaydiisa ka qoray mararka qaarkoodna reer Nabad iyo Nolol igu tilmaaneen nin meel-maag leh, Wasiirana iga Block-gareeyeen bogagooda baraha bulshada.